म अमेरिकी नागरिक होइन, के मैले १२ सय डलरको चेक पाउँछु ? « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas
तपाई अमेरिकी नागरिक नभएपनि अमेरिकी सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबिरुद्ध जुध्न ल्याएको राहत प्याकेजले प्रदान गर्ने १२ सय डलरको चेक पाउन सक्नुहुनेछ । तर तपाई अमेरिकी सरकारको करदाता हुनुपर्छ । अर्थात् तपाईले सोसल सेक्युरिटी नम्बर प्राप्त गरेर कर तिरेको हुनुपर्छ ।
अमेरिकामा सोसल सेक्युरिटी नम्बरसहित बसोबास गरिरहेका र काम गरिरहेका गैर नागरिकहरुले समेत यो चेक प्राप्त गर्नुहुनेछ । जसमा कामदार भिसामा काम गरिरहेकाहरु र ग्रिनकार्डवाहक समेत पर्दछन् । तर भिजिटर भिसामा अमेरिका आएकाहरु र अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरु भने योग्य हुनेछैनन् ।
पारित गरेको प्याकेजमा गैरआवासीय व्यक्ति उक्त रकम प्राप्त गर्न योग्य नहुने उल्लेख छ । सामान्यतया विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरु, जे, क्यु भिसामा रहेकाहरु, विदेशको सरकारका कर्मचारीहरु गैरआवासीय व्यक्तिका रुपमा गणना गरिन्छ । तर अमेरिकामा विगत तीनबर्षको अवधिमा १८३ दिन अमेरिकामा बसेका लगायतका व्यक्तिहरु आवासीय व्यक्तिका रुपमा गणना हुन्छन् ।
आईआरएसको उपस्थीति परिक्षणमा जुनसुकै अध्यागमन स्टाटस भएपनि व्यक्ति आवासीयको परिभाषामा पर्नसक्छ । र, यो परिभाषामा परेर ट्याक्स फाइल गरेको व्यक्तिले सरकारबाट पाउने राहत चेक प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर ए, जी, जे, क्वु, एफ, एम लगायतका भिसामा रहेका व्यक्तिहरु उपस्थीति परीक्षणमा प्रयाप्त समय बसेपनि आवासीयको परिभाषामा नपर्ने भएकाले राहत रकमका लागि योग्य हुनेछैनन् ।
को आवासीयको परिभाषाभित्र पर्छ ? को पर्दैन ? यहाँ चेक गर्नुहोला ।
प्याकेजको पूर्ण पाठ ।